शिक्षा Archives - Page3of 17 - Changupatra
अभिभावक संघको २० औं साधारणसभा सम्पन्न, प्रजापतिको नेतृत्वमा १९ सदस्यीय कार्यसमिति
भक्तपुर, १७ माघ । अभिभावक संघ नेपाल भक्तपुरको २० औं साधारण सभा शनिबार भक्तपुरको रोम्बस सेकेण्डरी स्कुलमा भएको छ । शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरणलाई हटाई सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्नका लागि जतिसक्दो बढी अभिभावकहरु संलग्न गराई एकतावद्ध र…
नगरपालिकाद्वारा ‘बचत खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरिको’ कार्यक्रम सुरु, हेडसरको ‘खान थाल्यो टाउको’ !
भक्तपुर, १५ माघ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले छोरी शिक्षाको लागि लागि बचत खाता योजना सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले ‘वचत खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरीको’ नारा तय गरी बचत खाता योजना प्रारम्भ गरेको हो । यो योजनालाई सघाउन नगरपालिकाले नेपाल…
गणेश माविमा कविता लेखन प्रशिक्षण
भक्तपुर, १४ माघ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नंं ५ छालिङस्थित श्री गणेश माध्यमिक विद्यालयले कविता लेखन प्रशिक्षण गरेको छ । छालिङको गुडीको सो विद्यालयका कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीका लागि कविता प्रशिक्षण गरेको हो । विद्यार्थीमा रहेको…
छात्रवृत्तिले पूरा गरेको सपना, एसइईदेखि एमबीबीएससम्म उत्तीर्ण
भक्तपुर, १४ माघ । छात्रवृत्ति नहुँदो हो त, सीमा खत्री र राधा ज्ञवालीको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने सपना सायदै पूरा हुन्थ्यो । त्यही छात्रवृत्तिकै कारण उनीहरुले उच्च शिक्षा मात्र हासिल गरेका छैनन्, उनीहरुले क्रमशः आफ्नो जीवनको लक्ष्यका रुमा रहेको एमबीबीएस…
सबै स्कुल ज्योतिजस्तै कहाँ हुन्छन् र ?
– हरिसुन्दर छुकां/ भक्तपुर । २०४४ सालको असार ५ गतेबाट शुरु भएको गुण्डु किवाचोकस्थित ज्योति माध्यमिक विद्यालय २०६० सालसम्म प्राथमिक विद्यालय थियो । ६० सालपछि मात्र मात्र विद्यालयले निमाविको पठनपाठनको स्वीकृति पायो भने २०६८ देखि मावि । त्यो बेलासम्म ज्योतिको…
दामी बन्दै डाँडापाटी, आधारभूत स्कुलमा साढे एक करोडको लागतमा संरचना !
भक्तपुर । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नंं ९ ताथलीको डाँडापाटी आधारभूत विद्यालयको स्वरुप अहिलेको जस्तो चिटिक्क होला भन्ने कमैमात्र स्थानीयले मनमा लिएका थिए । वि.सं. २०४१ साल साउन १९ गते पराले छानो र बाँसको भाटामा माटोले लिपेर बनाएका कक्षाकोठाबाट सुरु…
अमर्यादित तरिकाले कक्षा ११ को परीक्षा लिएको आरोपमा प्रअसहित दुई शिक्षक पक्राउ
भक्तपुर, ७ माघ । परीक्षा केन्द्र भन्दा बाहिर होटलमा लगी अमर्यादित रुपमा परीक्षा लिएको र अन्य प्रचलित कानून बिपरितको कसूरजन्य कार्य गरेको अभियोगमा ३ जना शिक्षकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पोखरा महानगरपालिका १ पुरानो टुँडिखेलस्थित राष्ट्रिय माध्यामिक बिद्यालय कास्कीका…
विद्यालय निरीक्षकलाई शिक्षकको माग : अर्को पालि आउँदा तलबको पनि बन्दोबस्त गरेर आउनु होला ।
विद्यालय निरीक्षणको लागि पाल्नुहुने आदरणीय अधिकार प्राप्त कर्मचारी ज्यूहरु, अर्को पालि आउँदा महिनौंसम्म तलब नपाएका शिक्षकहरुको लागि तलबको पनि बन्दोबस्त गरेर आउनु होला । शिक्षक माथिको बिभेद अन्त्य गरियोस् । लक्ष्मीसुन्दर सुवालको फेसबुकबाट ।
बागेहिणीका विद्यार्थीले स्वेटर पाएपछिको खुसी !
भक्तपुर, ५ माघ । माघको चिसोमा न्यानो कपडा विना विद्यालयमा आउन बाध्य विद्यार्थीले स्वेटर पाएका छन् । आर्थिक अभावका कारण स्वेटर लगाएर विद्यालय आउन नपाएका भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ७ बागेश्वरीको वागेहिणी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले स्वेटर पाएका हुन् ।…
नगरपालिकाको ‘उत्कृष्ट’ माविलाई २५ लाखको स्कुल बस, विद्यार्थी– शिक्षक दुबै दंग
भक्तपुर, २७ मंसिर । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ८ सुडालको सुडालको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयले स्कूल बस पाएको छ । बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुडालको थाकलमाथस्थित सरस्वती माविलाई स्कुल बस उपलब्ध गराएको हो । विद्यालयले शैक्षिक गुणस्तरमा मारेको फड््को…